Sadio Mane oo Hadiyad u Diray Dalkiisa.. MUXUU SAMEEYAY ?? – Gool FM
( Champ’ League ) 25 Maajo 2018. Sadio Mane ayaa hadiyad ahaan ugu diray magaalada uu ku dhashay ee dalka Senegal 300 oo funaada Liverpool ah, wuxuuna ficilkaan deesinimada ah sameynayaa ka hor finaalka Champions League ay Real Madrid wajihi doonaan si ay ku xirtaan dadkiisa inta ay socoto cayaarta.
26 jirkaan weerarka ka cayaara ayaa ku koray magaalada Bambali oo dhacda galbeedka wadanka qaarada Africa ku yaal xili naadigiisa Reds ay la cayaari doonto sabtida kooxda 12 jeer qaaday koobka kooxaha yurub ee Real Madrid.
“Waxaa jira 2,000 oo xaafadu ah. Waxaan soo iibsaday 300 oo funaada Liverpool si aan ugu diro dadkeyga xaafada, sidaa darteed taageerayaashu way xiran karaan inta ay daawanayan finaalka,” ayuu yiri Mane.
“Hooyadey iyo adeerkey, dhamaantood wey daawanayaan.
“Ma jiro qof xafadaa oo shaqeyn doona maalin taas. Waan ku laaban doonaan xagaaga kadib koobka adduunka waxaan rajeynaa in qof walba tusiyo guusheyda.”
Xaafada, waan halka ay weli ku nool yihiin qoskeyga, waa meeshii aan ku daawaday finaalka Liverpool ay soo laabashada caanka ah AC Milan kaga qaaday finaalkii 2005 – da’deyduna waxay aheyd 13 jir.
“Waan xasuustaa AC Milan v Liverpool. Seddax iyo eber ayaa la geeyay kooxdeyda, intaa kadib 3-3 ayay noqotay cayaarta ugu dambeyna rigoorayaal ayaan ku badinay. Waa xasuus igu weyn aniga,” ayuu yiri Mane, kasoo shaaca ka qaaday inuu waqtigaas ahaa taagere Barcelona.
“Haddii aad sheegtey markaas waxaan ciyaari lahaa finalka waxaan dhihi lahaa waa wax cajiib ah nolosheyda, waxaan rajeyneynaa inaan ku guuleysaneyno.”
Ronaldo oo Qiray in Maxamed Saalax uu soo Xusuusiyo.....!!!!